အသက် ၄၅ နှစ် - စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုများလာခြင်း၊ OCD လက္ခဏာများလျော့နည်းလာခြင်း၊
အသက် ၄၅ နှစ် - စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရခြင်း၊ OCD လက္ခဏာများလျော့နည်းလာခြင်း၊
အချိန်များတွင် Euphoria ပီတိခံစားချက်များကို
ဒီထက် OCD လက္ခဏာတွေ
စွမ်းအင်နှင့် / သို့မဟုတ်တီထွင်ဖန်တီးမှုအလွန်များလွန်းသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံအိပ်မရနိုင်ပါ
နောက်ဆုံး PMO: မတ်လ 31st, 11: 25 AM
Streak အဆုံး: ဧပြီလ 30, 11: 40 AM
Streak ကြာချိန်: 30 နာရီ 24 x
ကတိုကျတှနျး: လက်တဆုပ်စာအကြောင်းပါ (Pun excuse)
PMO: အကြိမ်အနည်းငယ်ချောင်းကြည့် masturbate ဘူး, နေ့ 30 (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) တိုင်အောင်, အော်ဂဇင်မ
Flatline: ရက်အနည်းငယ်အပျော့စားရောဂါလက္ခဏာတွေအကြိမ်ပေါင်းများစွာလျှင်မသေချာ flatline
*** ** အသေးစိတ်ကိုရောင်းချသူအကျိုးအမြတ် \_*
ဒီဟာကကျွန်တော့်အရှည်ဆုံးအပိုင်းပါ ငါပိုရှည်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်Aprilပြီလ 30 ရက်နေ့တွင်ငါပြန်။ ငါအချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရင်းနှိုးဆော်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၃၀ x ၂၄ နာရီမတိုင်မီနောက်ဆုံးသောကာလ၌စာသားအတိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြီးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဲဒါဟာသတိကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လို့နောက်မှမကောင်းဘူးလို့မခံစားရဘူး။ ငါကငါ့သင်ယူမှုအတှေ့အကွုံ add လိမ့်မယ်နေသေးတယ်။ ည ၁၁ နာရီ ၄၆ မိနစ်မှာ (အဲဒီနေ့မှာ 30 ကြိမ်မြောက်) PMO'd ပြီးနောက်ငါအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၅ ရက်တွင်ပါ
ကျနော့်အမြင်အရဒီဟာကငါ့သင်ခန်းစာပဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ ကနေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလုံးဝကြည့်ရှုခြင်း (ကြည့်ခြင်း) ကိုတစ်လမ်းလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငါအနည်းငယ်တိုက်တွန်းမှုသာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့မှာနံနက်သစ်သားမရှိဘူး။ (ငါ့ရဲ့ ၁၅ ရက်တာအရှည်ဆုံးကာလအတွင်းငါလုပ်ခဲ့တယ်) ။ ရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်ခန့်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ nofap မတိုင်ခင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုတုန်ခါနေပြီးနေ့စဉ်တိုက်တွန်းမှုတွေကြောင့်ပါ။ သွေးပေါင်ချိန်တက်လာတာနဲ့အမျှပိုများလာတယ်ဆိုတာသုသေသနပြုခဲ့တာကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သင့်ရဲ့သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု (ငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှာပိုမိုမြင့်မားခြင်း) ကသင့်ရဲ့သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုမှတစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ငါသော်လည်းတကယ်တော့များအတွက်မသိရပါဘူး။
ငါဒီ post ကိုအတိုချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်စွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ဒါစွမ်းအင်ဒါ wow! အိပ်ယာကနိုးလာဖို့အိပ်ရာကနိုးလာဖို့နံနက်ယံမှာရေခဲမုန့် (သို့) ကော်ဖီ (တစ်ခါတစ်ရံမှာနှစ်မျိုးလုံး) လိုအပ်နေမှထွက်လာခဲ့တယ်။ ငါကညတစ်ည skip ဒါမှမဟုတ်နှစ်နာရီသာအိပ်မယ်ဆိုရင်ငါအရမ်းငြီးငွေ့ပြီးနေ့လည်မှာအိပ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ ၄၃ နှစ်မှစ၍ ထိုအရာကိုမဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါ။ nofap မတိုင်မှီငါ 43 ညမှာအမြဲအိပ်မောကျနေတယ်။ တဖန်ငါ4ဖြစ်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ တကယ်တော့ငါခံစားရတယ် ပိုကောင်း! ငါ့ဘဝရဲ့ဘယ်အချိန်မှာမှစွမ်းအင်အများကြီးမရခဲ့ဘူး။
၁၁ ရက်တွင်အားကစားရုံ၌ကျွန်တော်အလွန်အစွမ်းထက်သောအစွမ်းခွန်အားကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စွမ်းအား ၂၀ မှ ၃၃% အကြားရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ငါ triceps အပေါ် 11 ပေါင် (20 ကီလိုဂရမ်) 33 ပေါင် (44 ကီလိုဂရမ်) ရုတ်သိမ်းရေးကနေသွားလေ၏။ သင်ဟာကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသူ၊ ကာယဗလစိုက်သူဖြစ်ရင်၊ အဲဒါကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့၊ အမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အရာ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ တတိယမြောက်ကိုယ်အလေးချိန်တက်နိုင်ခြင်းသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမ ၀ င်ပါ။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအရင်စာပိုဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ထပ်ဆင့်ပြင်းထန်မှုနဲ့အတူငါဟာပိုပြီးကြာရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းကိုနံနက် ၁၀ နာရီတွင်စတင်ပြီး ၁ နာရီ (၂.၅ နာရီ ထွက်၍ ၂ မိနစ်နှင့် ၁၅ မိနစ်အကြာတွင်ကြွက်သားများအကြားခွဲစိတ်ခြင်း) ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းပင်ပန်းသည်ဟုမခံစားရပါ။ nofap မတိုင်ခင်ကြွက်သားအုပ်စုတစ်စုကိုငါလုပ်မယ်၊ နောက်နာရီအနည်းငယ်အတွက်အိပ်ရာအာလူးဖြစ်လိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်စိတ်တော်တော်များများပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ ငါကတစ်နည်းနည်းခံစားခဲ့ရတစ်ခုတည်းသောအချိန်ရထားထဲမှာ, နေ့ 21 အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုလွန်အကြောင်းကိုနာရီဝက်အကြာတွင်နေဆဲအများပြည်သူနှင့်တစ်ဦး၏အလယ်၌ဖြစ်ခြင်းစဉ် ပင် busier လူအစုအဝေး။
တခါတလေငါအရမ်းပျော်မှာပဲ၊ ငါတကယ်မပြောနိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် OMG ဂီတကိုနားထောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလုံးလုံးလျားလျားလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်ဤကြီးမားသောစွမ်းအင်လှိုင်းကိုခံစားမိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုမရှိသော်လည်းဤတာရှည်ကိုရှောင်ရန် (ကျွန်ုပ်တို့၌တိုက်တွန်းမှုများစွာမရှိခဲ့သော်လည်း) ကျွန်ုပ်အား ပို၍ စည်းကမ်းရှိစေခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော့်အလုပ်မှာစည်းကမ်းမကင်းတဲ့သူလို့တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူး၊
ငါအထူးသဖြင့်နံနက်ယံ၌နှင့်ငါမစားမှီ, ဒါပေမယ့် nofap ပေါ်မှာအနည်းငယ်အတန်ငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည် baritone အသံအနည်းငယ်ရှိသည်။
ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတွက်ကြည့်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏ OCD ရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းကို 80% ကျဆင်းသွားသည်။
၉ နှစ်အရွယ်မှာမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတဲ့နောက်ငါ့လက်သည်းကိုက်တယ်။ ငါအကျင့်ကိုအပြည့်အဝကန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါ nofap နေစဉ်ကိုက်ဖို့လုံးဝနီးပါးတိုက်တွန်းမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလမ်းလျှောက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲလက်သည်းကိုက်ဖို့တွန်းအားကပြန်လာတယ်။ ကျွန်မလက်သည်းကိုက်ဖို့တွန်းအားဟာ fap လိုချင်တဲ့သဘောနဲ့အတူတူဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ဆွ။
ငါ့ကို nofap အပေါ်ပြုမိအလုပ်ရရန်အဘို့အဒါဟာ (အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အ ADHD မှစွပ်စွဲထားတဲ့) ငါ၏အဦးနှောက်မြူလုံးဝသွားကြောင်းနှင့်ငါအရူးနဲ့တူပစ္စည်းပစ္စယများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, SO လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ADHD အခြေခံအားဖြင့်ငါ့အဘို့ခွအေနအေဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။
ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်ကဆူညံသံများ၊ အိမ်များ၊ ခွေးများနှင့်အပြင်ဘက်ရှိကလေးငယ်များကိုဟောင်ခြင်း၊ လူနာတင်ယာဉ်များစသည်တို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုးကျိုးများစွာခံစားရသည်။ nofap တွင်၊ ထိုအသံများကိုကျွန်ုပ်ကြားရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ပါ။ ဒါကကျွန်မအတွက်မျက်စိဖွင့်ပေးလိုက်တာပါ လူတွေရဲ့အာရုံမပျံ့လွင့်မှုကိုလည်းငါစိတ်ထဲမထားပါဘူး။ အတိတ်ကာလကဒီဟာငါ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုချိုးဖျက်နိုင်ပေမယ့် nofap ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါနောက်ပြန်ပခုံးနှင့်အတူ, nofap အပေါ်, မချ, မျှော်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်လမ်းလျှောက်ခြင်း, အမှု၌ဒါအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်လုပ်နေငါ၏အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးလိမ့်မည်။
nofap မကြိုးစားမီဤအကြောင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးဖတ်သည့်အခါ၎င်းကိုအနတ္တအဖြစ်စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ ဒီအရှည်ဆုံး (၁၅ ရက်) မတိုင်မီကျွန်ုပ်၏အရှည်ဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်တစ်နေ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည် ၃ ကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့တာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး အဲဒီနောက်ဒီပုံကြမ်းကိုကြည့်ပြီးငါ့ရဲ့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တဲ့နေ့တွေရှိခဲ့တယ်၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုပြက်ရယ်ပြုခဲ့တဲ့စက္ကူဆိုင်းဘုတ်လိုပဲ၊ ငါမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကအရူးပဲ။ ငါဒီအပေါ်သီးခြား post ကိုရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အသေးစိတ်အတွက်မှတ်ချက်များအတွက်ငါ့ကိုမေးပါ။ သူတို့ထဲကတချို့ကကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ငါ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပေမဲ့မျက်စိကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ မင်းတို့ကမင်းကိုအချိန်အတော်ကြာမလွှတ်သေးတဲ့အနံ့တွေလိုပဲ။ ငါသည်လည်းပိုပြီးစေ့စပ်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးပြုံးနေခံရငါ့ကိုကြည့်ရှုခြင်းများစွာကို attribute ။ သို့သော်သတိရပါ၊ တစ်နေ့တွင်အားကစားရုံ၌ကျွန်တော်နေစဉ်ကိုက် ၅၀ (မီတာ) ခန့်အကွာလမ်းမကြီးပေါ်မှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပြုံးပြရင်းနှင့်ပရောပရည်လုပ်နေသည်။ ငါပင်ပြုံးနေသည်မဟုတ်, ပရောပရည်အလွန်ထင်ရှားသည်။
အမျိုးသမီးတော်တော်များများကကျွန်မကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျွန်မမျက်လုံးမှာအမျိုးသမီးတွေကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေနေတာ၊ ငါသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိရှာမရတာမပျော်ဘူး၊ အားကစားတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်။ ပြီးတော့ငါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူတူပဲ၊ သူတို့ဟာကျွန်တော့်လိဂ်နဲ့မတူတော့ဘူးလို့ခံစားရလို့၊ ကျွန်တော့်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ယုံကြည်မှုကတစ်ခါတလေအရမ်းရူးနေလို့အရေးမကြီးဘူး ဘာ ငါမြင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မျိုးကိုကျွန်မမျက်စိ-အဆက်အသွယ်များနှင့်ပရောပစေလိမ့်မယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်, ဒီလုပ်ဖို့နိုင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ သဘောပေါက် သငျသညျမဆို fricken အားထုတ်မှုမရှိဘဲလုပ်နေ ... ကရိုးရိုးသားသားငါ့ကိုမနိုင်မနင်းဘုရားကဲ့သို့ခံစားမိစေ၏ စာသားတော့ပိုကောင်းတဲ့ခံစားမှုတော့မရှိပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာငါ nofap မတိုင်မီကရှိခဲ့တဲ့အတ္တအတိအကျအတိအကျဖြစ်တဲ့အတွက်။ ငါသည်လည်းအမျိုးသားများနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံမိသော်လည်းလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်သောကြောင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါအရာများ (စွမ်းအင်၊ ယုံကြည်မှု၊ မျက်လုံးချင်းစသည်တို့) ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်နည်းလမ်းရှာပြီးလူများကိုလူမှုရေးအရဆက်ဆံရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အသက် ၆၀၊ ၇၀၊ အထက်လူများနှင့်လည်းယခုစကားပြောဆိုလိုသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အဘယ်အရာကိုသူတို့သညျငါ့ကိုပြောပြပါ။
Nofap ကကျွန်တော့်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုပြန်လည်ပေးနေပြီ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒါပေမယ့်အလွန်အထွေထွေချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ဥပမာအားဖြင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆေးရုံတက်ရပြီးသူတို့ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသော်လည်းပန်းတွေနဲ့လည်ပတ်ချင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းတွေကိုလည်းချစ်ပြီးငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသူတွေကိုတောင်ချစ်တယ်။ တခြားသူတွေကိုမုန်းတဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့မပျော်ကြဘူးဆိုတာငါသဘောပေါက်ပြီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီမေးခွန်းမေးပြီးနောက်မှာငါကဒီအကြောင်းကိုကြားဖူးတယ် -“ လူတွေဟာငါနofapမှာလုပ်နေတယ်လို့ခံစားရရင်သူတို့ကတခြားသူတွေကိုမုန်းတီးချင်ကြမှာလား။ ”; ဟင့်အင်း၊ ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကငါ့ကိုမုန်းတီးတဲ့အခါသူတို့ဟာနေရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါသူတို့ကိုကူညီဖို့ (ချစ်မြတ်နိုးဖို့) ကြိုးစားရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေမှာထားခဲ့ရမယ်။
သောကြောင့် nofap မှတဆင့်တတ်နိုင်သမျှလုပ်, ငါ့ပိုမိုပြင်းထန်လာလေ့ကျင့်ခန်းများငါသူရဲ / အားကောင်းအငယ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ပုလ်ခံစား!
ငါကကမ္ဘာပေါ်မှာအလွယ်ကူဆုံးအရာကဲ့သို့အလွတ်တန်းအလုပ်လက်ခံရရှိသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုဆွဲဆောင်နိူင်သောဥပဒေမှတစ်ဆင့်ဆွဲဆောင်လိုသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်စိုးရိမ်စိတ်များလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်အတူမှော်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်မမကြာခဏအာဏာမဲ့ခံစားခဲ့ရမတိုင်မီသော်လည်း, ငါ၏အသက်တာ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဖြစ်ခြင်းများကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ရောက်ရှိဖို့အရမ်းကြီးမားတဲ့အဘယ်သူမျှမရည်မှန်းချက်လည်းမရှိနဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်မတိုင်းကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်သေးငယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ခွဲခြားရန်လိုအပ်ပါသည်သင်သိရဖို့လုံလောက်တဲ့လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ခါတလေကျွန်တော်ဟာအရာရာကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ပြန်စဉ်းစားမိပြီးတစ်ရက်ထဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်များများအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားပျော်ရွှင်မှုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာနာရီပေါင်းများစွာမင်းကိုသိတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့နာရီပေါင်းများစွာမကုန်မှီ။ ဤသည်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်အကောင်းဆုံးခံစားချက်ပါ! သူတို့ဟာဘာမှမခံစားရဘူးလို့ပြောတဲ့အခန်းတွေကနေငါမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သင်သည်ထိုလိင်စွမ်းအင်ကိုအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ကူးများနှင့်သင်လိုချင်သောအရာများ (အခြေခံအားဖြင့်ဆွဲဆောင်နိူင်သည့်ဥပဒေ) ရရှိရန်နည်းလမ်းများဖြင့်တင်ပြခြင်းအားဖြင့်သင်လိုချင်တာကိုပိုမိုပေးဆပ်ရန်သင်၏စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။
ငါ SO နည်းလမ်းများစွာအတွက်ငါ့အသက်ကိုတိုးတက်နေလေပြီတကား
*** အားနည်းချက်များ ** အသေးစိတ် \_*
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏မသေချာမရေရာမှုသည်ကျွန်ုပ်အားအခြားသူများကိုအလွန်အမင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခြင်း (အသံကျယ်ကျယ်၊ ခိုင်မာသည့်စကားလုံး၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ) တုန့်ပြန်စေသည်။ ငါသည်လည်းကြမ်းတမ်းသောကြည့်နေသည့်ယောက်ျားများကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် (ပုံမှန်အားဖြင့် (nofap မတိုင်မှီ)) ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သော))) ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးပြီး၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ခုသို့ ဦး တည်သွားပါကဂရုမစိုက်တတ်သောမျက်စိအဆက်အသွယ်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု၏။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးလိုက်တာကဒီဟာကကျန်းမာတဲ့အလေ့အကျင့်မဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါလွှမ်းမိုးမှုတိုးလာယုံကြည်မှုတစ်ခုဘေးထွက်ဆိုးကျိုး။
အဆိုပါတိုးမြှင့်စွမ်းအင်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခါတစ်ရံကျွန်မပတ်ပတ်လည်ရွှေ့နှင့်မဟုတ်ဘဲအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ထက်ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့လိုခငျြနဲ့တူခံစား, ဒါမှမဟုတ်ရေးမှတ်ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းစိတ်ကူးများအပြည့်အဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေ, ညအချိန်တွင်နိုးငါ့ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။
*** အကြံဥာဏ်တစ်ဦးကစကားလုံး ** \_*
ဒီ nofap ကိုစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်မမြင်ပါနဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်ရေးတိုက်တွန်းခြင်းကဲ့သို့သော 'ရုန်းကန်မှု' ကိုမင်းသတိရတိုင်းမင်းကမင်းကိုမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကုသနေကြောင်းသင့်ကိုယ်သင်ပြောရန်လိုအပ်သည်၊ သင်နေ့စဉ်ထည့်သည်သည်အခြားအဆင့်သို့တက်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ သင်ဒီနေမကောင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုမှကင်းဝေးနေတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနောက်အဆင့်တစ်ခုကိုတက်ဖို့လှေကားတစ်ခုတက်ပြီးဒီကနေ Donkey Kong လိုကွန်ပျူတာဂိမ်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားဟာထိန်းချုပ်ထားတာ၊ မင်းကမင်းကိုရည်စူးထားတဲ့ယောက်ျား (သို့မဟုတ်) မိန်းမပဲလေ။
ဒီအဖြေကိုရရင်၊ ငါကသံသယအရှည်ကြောင့်သံယောဇဉ်ကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့သူကရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေဆီကယောက်ျားတွေ (မိန်းမတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်) ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
LINK - အကြှနျုပျ၏ 30 ရက်ပေါင်း NoFap အကျိုးကျေးဇူးများကိုအစီရင်ခံစာ